Mashruucyada Qandaraasyada Carabta ee Masar - Ellicott Dredges Blog
Mashaariicda ugu weyn ee hadda socda ayaa ku lug leh Bariga Port-Said Axial Port. Naqshadaynta iyo dhismaha deked cusub oo ku taal bariga Port Said By-pass waxay buuxin doontaa baahida laga qabo gaadiidka badda. Wejiga koowaad ee mashruuca waxaa ka mid noqon doona dhismaha marinka marinka, biyo-weeyn, weel xaddidan, kanaal gaaban, iyo ballaarinta Port Said By-Pass. Qandaraasyada ayaa la helay dabayaaqadii 1998 waxaana abaalmarin la filayaa dhamaadka sanadka.
Dekadda-Suuqa Axial Port
Qiyaasta qorshaynta ayaa ka badan 100M m3. Aaggu waa qiyaastii 20 km2. Taasi waa sababta Bariga Port ay muhiim utahay in laga caawiyo dhoofinta maadama warshado iyo warshado weyn laga abuuri doono marka lagu daro kumanaan kun oo quudin ah kanaalka Elsalam. Dekadda waxaa lagu dhisi doonaa 4,500 feddan (4,669 ac.), Tanina waxay u baahan tahay 15,000 feddan (15,555 ac.) Mashaariicda warshadaha, bakhaarada, iyo aagagga xorta ah. Dekadda cusub waa inay dejisaa oo u adeegtaa horumarkan oo dhan.
Tani waa mid ka mid ah mashaariicda ugu mudan ee qaranka ee u adeegaya dhaqaalaha qaranka Masar sida soo socota:
• Soo jiidashada ganacsiga weelka ganacsiga ee Badda Mediterranean-ka oo $ $ $ $ 0 $ 6M / yr kordhisa 8.0% sanadkii.
• U adeegidda aagagga warshadaha ee ku xiga iyo ganacsiga xorta ah.
• Dhammaan daraasadaha suurtagalka ah waxaa ka mid ahaa in dekeddan ay soo jiidan doonto illaa 3.0 M TEU oo ah heerar illaa sannadka 2010
Marxaladda koowaad waxay ku lug yeelan doontaa dhismayaasha dhismaha oo leh wadar dhan dhererkeedu yahay 2,150 m iyo ku xiridda dekedda illaa qoto dheer 17m. Terminalku wuxuu yeelan doonaa awood 1.5M, 20-ft unugyo u dhigma (TEU's) sanadkii wajigiisa koowaad. U kacaya 3.0M TEU sanadkiiba wajigi labaad.
Dekada Waqooyiga Alsukhna
Qulqulka ayaa lagu qiyaasey qiyaastii 40M m3. Arinta ku saabsan Waqooyiga Suez Khaliijka, dekedan cusub waxay u adeegi doontaa aag warshado balaaran oo warshadeed ah sidaas darteed horumarku waa lama huraan isla markaana xiriirinta meelaha kale waa muhiim. North Suez Khaliijka wuxuu mudan yahay inuu ka faa iideysto mowqifkiisa iyo xaaladdiisa waana inuu awood u yeesho ballaarinta iyo isgaarsiinta.
Dowladda Jamhuriyadda carabta ee Masar waxay bilowdey hormarinta, naqshadeynta, iyo dhismaha deked cusub oo ku taal Waqooyiga Alsukhna ee Gacanka Suez si ay ula kulanto baahida laga qabo gaadiidka badda.
Wejiga koowaad ee mashruuca waxaa ka mid noqon doona dhismaha hal weel dhererkiisu yahay m '750 m-dherer ah (oo leh laba darbi oo dumin ah), marin marin, wareeg wareeg, iyo biyo-goynno. Aagga loo qoondeeyay wajiga koowaad waa waqooyiga aagga mashruuca oo qiyaastii dhererkiisu yahay 5-km dhererkiisuna yahay Suez. Wadada ugu weyn ee Alsukhna ee xeebta Gacanka iyo baaxadda qiyaastii ah 2km, oo ku taal xadka koonfureed ee Sky Hawk Touristic Village.
Qandaraasleyaasha Carabta waxay ku dhawaaqeen Heshiis lagu dhisayo Sumadda Ellicott® “Dragon®Dredge ee Masar
Ellicott® Darajo (Baltimore, MD USA), oo ah soosaaraha ugu da'da weyn uguna weyn adduunka ee soo saaraha goos gooska, ayaa ku dhawaaqay qandaraas Qandaraaslayaasha Arab (Qaahira, Masar) si loo dhiso taxane 1870 “Dragon®Dredge ee Masar hoos shati.
Qandaraaslayaasha Arab, Shirkada dhismaha ee ugu weyn Bariga Dhexe, waxay qabataa in kabadan US $ 1.5B shaqo dhisme sanadkiiba. Waxay ku firfircoonayd qoditaanka muddo ka badan 30 sano waxayna isticmaashaa Ellicott® astaan ​​astaan ​​gaar ah.
Taxanaha cusub 1870 “Dragon®”Qashin-qubka waxaa laga dhisi doonaa barxada markabka ee qandaraasleyda carabta ee ismaaciiliya isticmaalka Ellicott® naqshadaha iyo qalabka. Awood ayaa ka imaan doonta Birta matoorrada uu keenay ganacsadaha CAT ee Masar, Mantrac. Iyadoo ay ka sarreyso 1755 hp (1.309kw), Ellicott® dredge wuxuu awood u yeelan doonaa inuu bamka ka qodbo qoto dheer oo ah 50ft (15.2m). Qulqulatada ayaa ka qiimo badan hal milyan oo doollar.
Qulqulka waxaa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo agab loogu talagalay waddo cusub oo caalami ah oo loogu adeego Port Port City, iyo dib ula soo noqoshada dhulalka isla aagga. Qandaraasleyda Arab waxay qandaraas $ 10M la leedahay dowladda Masar oo u baahan adeegsiga dhowr ka mid ah Ellicott® summada markab duulimaadkeeda. Unugyadan ayaa shaqeeya waxay u adeegi doonaan dhowr mashruuc oo uu iftiimiyey shir maalgashi oo ka dhacay Qaahira oo ay maalgalisay Hay'adda Ganacsiga iyo Horumarinta Mareykanka.
Qandaraasleyda Carbeed waxay ka qeyb qaateen mashaariicdan soo socda:
- Navigation River Nile ee magaalada Luxer, oo hoos timaadda Wasaaradda Waraabka. Waxaa lagu qiyaasay 6.0 milyan m3 oo ah qodidda, nadiifinta, iyo qodista ilaa heerka -4 koorsada hagidda webiga.
- Saldhigga Korantada ee Oyoan Mousa, Wasaaradda Korontada 3.3 milyan oo m3 oo qodis ah, oo ay kujirto qodista kanaalka laga soo galo iyo kan laga baxo ee saldhigga korontada ee ciidda iyo xoogaa dhagax ah.
- Marxaladda Labaad ee Port Said Ring-Road, Port Said Governorate. Kala-goynta Lake Manzalah si loo dhammaystiro dhismaha jid-weyne cusub oo ka yimaadda Ras el Ash illaa Doneletta City.
Waxaa laga daabacay Dhismaha Qodista & Macdanta Adduunka